Freshmarketer: विश्लेषण, परीक्षण, र यस रूपान्तरण अनुकूलन सुइट निजीकृत Martech Zone
शनिबार, अक्टोबर 3, 2020 शनिबार, अक्टोबर 3, 2020 Douglas Karr
कामको मात्रा जुन डिजिटल गुणहरू र सामग्रीमा राखिन्छ जुन वास्तवमा कुनै पनि व्यवसाय चलाउँदैन दिमाग-बग्गलिंग हो। यो उद्योगको सेवा पक्षमा पनि निराश छ जहाँ ग्राहकहरूले साइट, एकीकरण, वा सेवा सुरू गर्न परियोजनामा ​​जोर दिन्छन् ... तर त्यसपछि त्यो मञ्चको प्रयोग अनुकूलन गर्न समय र उर्जामा लगानी गर्ने छैन।
अनुकूलन कम्पनीहरु प्राय: लगानी मा आफ्नो फिर्ती महसुस गर्न असफल किन एक प्रमुख कारण हो। एक सेवा प्रदायकको रूपमा, हामी जोड दिन्छौं कि अनुकूलन समग्र प्रक्रियाको एक हिस्सा हो। यो बिना, कम्पनी सफल हुनेछैन र त्यसपछि हामी जवाफदेही हुनेछौं ... ग्राहकलाई अप्टिमाइजेसन गर्न समग्र परियोजनाको एक हिस्सा भैरहे पनि। हामी सबैलाई फेर्न सक्दैनौं, तर हामी प्रयास गर्दछौं!
फ्रेशमार्करको रूपान्तरण अनुकूलन सुइट सुविधाहरू
उपकरणहरूको बीचमा जग्ल नगरी तपाईंको समय र पैसा बचत गर्नुहोस्। वेबसाइटको विश्लेषण, अप्टिमाइज, र निजीकृत गर्न सबै तपाईको आवाश्यक हुन्छ Freshmarketer.
हीटम्याप्स - तपाईंको वेबसाइटमा आगंतुकको गतिविधि कल्पना गर्नुहोस्। क्लिकहरू पहिचान गर्नुहोस्, वास्तविक समयमा स्क्रोलहरू। स्पट र टुटेका लिंकहरू, ध्यान भंग गर्ने छविहरू, र खराब प्रदर्शन गर्ने वेबसाइट तत्त्वहरूलाई फिक्स गर्नुहोस्।
आगन्तुक सत्र रेकर्डि and र पुनःप्ले - तपाइँको वेबसाइट आगंतुकको अनुभव क्याप्चर गर्नुहोस् र तिनीहरू कहाँ अडिनेछन् पहिचान गर्नुहोस्, कुन खण्डहरू व्यापक रूपमा रुचाइएका छन्, र उपेक्षित छन्।
स्प्लिट परीक्षण - तपाईको साइटमा जटिल डिजाइन परिवर्तन गर्न बहु URL हरू, बहु रूपहरू परीक्षण गर्नुहोस्, जसले राम्रो रूपान्तरणको परिणाम दिन्छ र तपाईंको राजस्व बढाउँदछ।
A / B परीक्षण - राम्रो रूपान्तरण वेब पृष्ठहरू पहिचान गर्न वेबसाइट मान्यता मान्य गर्नुहोस्। WYSIWYG सम्पादकको साथ सजिलै भिन्नताहरू सिर्जना गर्नुहोस् र राजस्व लक्ष्यहरू नाप्नुहोस्।
निजीकरण - तपाइँको वेबसाइट आगंतुकों को लागी अनुभवहरु को अनुकूलित र रूपान्तरण को लागी हल्का धकेल्नुहोस्। सेट अप गर्नुहोस् र तपाईंको टेक टीम समावेश नगरी निजीकृत अनुभव चलाउनुहोस्।
फारम एनालिटिक्स - अधिक लीडहरू उत्पन्न गर्न तपाईंको फारामहरू अनुकूलन गर्नुहोस्। ड्रप अफ्स, हिचकिचाउने समय, सुधार दर, र अन्य मेट्रिक्स मापन गर्नुहोस् र अधिक आगन्तुकहरूलाई लिडमा रूपान्तरण गर्न।
फनेल एनालिटिक्स - तपाईंको बहु-पृष्ठ वेबसाइटमा आगन्तुक ड्रप-अफहरू ट्र्याक गर्नुहोस्, र रूपान्तरणको अवसर कहाँ छुटाइएको थियो पहिचान गर्नुहोस्।
सर्वेक्षण र प्रतिक्रिया - तपाईंको श्रोतालाई व्यस्त राख्नुहोस् र तिनीहरूलाई सही समयमा सन्देश ट्रिगर गरेर तपाईंको साइटबाट निस्कनबाट रोक्नुहोस्।
फ्रेशमार्केटरको लागि निःशुल्क साइन अप गर्नुहोस्
खुलासा: म एक सम्बद्ध हुँ फ्रेशमार्केटरको रूपान्तरण अनुकूलन सुइट.
टैग: रूपान्तरण दर अनुकूलनcroताजा मार्केटर